Fikarohana momba ny firaisana 2: Baikals, Grey ary Pleiadean: Ireo karazana ET mitondra ny UFO voasambotra tamin'ny horonantsary nataon'ny tafika amerikana ary UFO nalain'ny tafika italiana - Fikarohana momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao.
Miaraka amin'ny fampiasa avy amin'ny: Spirit Being Ahtun Re nampitaina tamin'ny alàlan'i Kevin Ryerson
Tsindrio ny sary hanitatra sy hamakiana fanazavana
Ny mpanamory fiaramanidina amerikana dia misambotra UFO amin'ny horonan-tsary
Nanjary liana tamin'ny ETs sy UFO aho rehefa nanamafy ny tafika an-dranomasina amerikana tamin'ny septambra 2019 fa tena marina ny horonantsary UFO noraketan'ireo mpanamory fiaramanidina amerikana.
Manana fomba fijery tsy manam-paharoa momba ireo olana ireo aho rehefa niasa tamina mpampita vaovao Kevin Ryerson hatramin'ny 2001, izay mandefa fanahy antsoina hoe Ahtun Re, izay naneho ny fahaizany manao lalao taloha miaraka amin'ny fahamendrehana avo lenta. Araka ny voalaza etsy ambany, Ahtun Re dia manana fahalalana momba ny ET sy UFO.
Ny porofon'ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao dia afaka manampy amin'ny famoronana tontolo milamina kokoa sy manamora ny fifandraisana ET
Ny tena mahaliana ahy dia ny porofo kendrena momba ny vatana vaovao indray, izay mampiseho an'izany afaka manova ny fivavahana, ny firazanana ary ny zom-pirenena isika amin'ny androm-piainana iray hafa. Io fahatakarana io dia hamorona tontolo milamina kokoa, satria ny ankamaroan'ny fifandonana sy ny ady dia miankina amin'ny tsy fitovizan'ireo marika ara-kolontsaina ireo. Tsy te hifandray mivantana amin'ny zanak'olombelona ny ETs noho ny fironantsika hanao herisetra sy ady.
Araka ny nofaritana tao amin'ny lahatsoratro voalohany, ny ETs dia mivoatra ara-panahy amin'ny alàlan'ny dingan'ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao, toy ny zanak'olombelona. Raha izany dia efa manana zavatra iraisana itovizantsika isika.
Ahtun Re dia manana Contact ET
Araka ny nomarihina, Ahtun Re dia nitantara fa izy koa dia manana fahalalana momba ny ET sy ny sambon-danitra ataon'izy ireo. Ny lahatsoratro voalohany amin'ity lohahevitra ity, izay misy ny lahatsarin'ny US Navy, dia omena etsy ambany:
ET, UFO, Reincarnation, God, embryology ary modely ho an'ny fiainana, miaraka amin'ny fanehoan-kevitra momba ny fandaharana "Tsy fantatra" sy "Vahiny Vahiny"
Noho ny fahatokisan'ny lahatsarin'ny tafika an-dranomasina amerikana dia nanontany an'i Ahtun Re aho hoe iza amin'ireo karazana ET mpanamory fiaramanidina manokana nogadraina tamin'ny horonantsary mpanamory fiaramanidina Navy.
Ny zavatra iray nianarako tao anatin'ny andiam-pivoriako momba ny UFO niaraka tamin'i Kevin sy Ahtun Re dia ny fiompiana karazana ET maro dia maro, na amin'ny teknolojia sambon-danitra na amin'ny asa fitoriana.
Ny toe-javatra dia mitovy amin'ny fomba fiarahan'ny mpanamory sambon'ireo firenena samihafa eto ambonin'ny tany miasa amin'ny International Space Station (ISS).
Ny Baikaly: ET an'ny ranomasina sy ranomasina
Ny karazana ET malaza misongadina ao amin'ny horonan-tsarimihetsika US Navy, izay hantsoinay hoe "Baikals", dia nipoitra avy tamin'ny planeta rano izay mitety kintana ao anatin'ny galaksiantsika Milky Way, izay mbola tsy hitantsika.
Rehefa nivoatra tamin'ny planeta rano ity karazana ity dia maro amin'ireo hetsika ataon'izy ireo eto an-tany no misy ny ranomasontsika sy ny fiainany anaty rano. Nyalsals dia azo raisina ho mpaka tantera-dranomasina ET.
Raha ny marina, ireo ET ireo dia voamariky ny miaramila sovietika Sovietika tany Farihy Baikal, izay any amin'ny faritra sasany dia mihoatra ny 5000 metatra ny halaliny ary mitazona ny ampahefatry ny rano velona rehetra eto an-tany. Koa satria ity karazana ET ity dia hita tany amin'ny Farihin'i Baikal, dia hiantso azy ireo hoe "Baikals" isika.
Ny tranga 1982 Lake Baikal ET
Ny farihin'i Baikal dia any atsimo atsinanan'i Siberia, akaikin'ny sisintany miaraka amin'i Mongolia. Tamin'ny 1982, ny tafika sovietika dia nanao fanazaran-tena ho an'ny mpitsabo scuba ao amin'ny farihin'i Baikal.
Ny mpitsabo sovietika fito dia teo amin'ny 160 metatra ambanin'ny tany no tsikaritr'izy ireo fa hitan'ny vondron'olona toa olona 9 metatra ny halavany. Amin'ny sarin'ny vondrona Baikals, ny fiara mifono vy mavo eo am-pototry ny sary dia maneho ny fitaovan'ny mpanamory sovietika.
Nitafy palitao metaly tery sy nifono vy toy ny fitaovana manarona ny lohany ireo zavaboary ireo, na dia tsy nanana tanky afaka manome rivotra na ôksizenina aza izy ireo. Rehefa afaka fotoana vitsivitsy, dia nihemotra ireo zavaboary humanoid hafahafa ireo fa tsy tazan'ireo mpanamory sovietika.
Fanandramana hisamborana farihy Baikal ET ary vokatr'izany dia fahafatesanà mpanao miaramila Sovietika efatra
Taorian'ny niverenan'ireo mpanamory sovietika tany amin'ny sambony ary nitatitra ny zavatra niainany tamin'ireto zava-manan'aina 9 metatra ireto, dia nasain'ny komandy ny mpanafika azy hiverina any amin'izay ahitan'izy ireo ireo zavaboary ireo ary hisambotra ny iray amin'izy ireo. Nomena fitaovana hanampiana ity iraka ity ireo mpanamory rano, anisan'izany ny harato lehibe.
Ny miaramila sovietika Sovietika fito dia nidina hatrany amin'ny 160 metatra ambanin'ny tany. Nihaona tamin'ny zava-manan'aina 9 metatra indray ireto mpialokaloka ireto. Taorian'ny baiko dia nanandrana nisambotra ny iray tamin'ireo zavamananaina tamin'ny harato ny iray tamin'ireo mpanamory sovietika.
Tamin'ity hetsika fikasana hisamborana ity dia nampiasa karazana fitaovam-piadiana ny Baikal ETs izay nahatonga ireo mpitsara sovietika fito hamoaka tampoka tampoka.
Io fiakarana haingana io dia nahatonga ny mpitsabo sovietika hiaina ny “miondrika, ”Ny toe-javatra miseho rehefa avy misondrotra haingana avy any amin'ny lalina, ka miteraka azota amin'ny lalan-drà, izay mety hahafaty. Taorian'ny fiakarana haingana sy ny fiolahana dia maty ny 4 tamin'ireo mpanamory rano ary ny 3 hafa kosa dia voan'ny soritr'aretina maharitra. Ireo tra-boina koa dia naratra ara-pientanam-po tamin'ny zavatra niainany.
Fanamarihana: ny sarin'ny mpanakanto momba ny Baikals voalaza etsy ambony dia avy amin'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra:
UFO: Ny porofo very: fihaonan'ny ranomasina lalina, vanim-potoana 1, fizarana 2
The Pleiadeans sy UFO Technology
Ny karazana ET iray hafa izay nandray anjara tamin'ny horonan-tsarimihetsika UFO an'ny US dia misy fanahy avy amin'ny antokon-kintana Pleiades, na izany aza, Ahtun Re dia nanondro fa ny fanahy avy amin'ny rafitra kintana Pleiadean dia niova tamin'ny voalohany tamin'ny planeta iray tao amin'ny antokon-kintana Andromeda.
Pleiadeans dia sasany amin'ireo zanak'Andriamanitra mandroso indrindra. Tamin'ny lahatsoratro voalohany tamin'ny ETs dia nanoratra aho fa amin'ny salanisa, ET dia nahavita milina faharanitan-tsaina, toy ny fiara Tesla, 400,000 taona lasa izay.
Etsy ankilany, Ahtun Re dia nizara fa ny Pleiadeans dia namorona milina fitsikilovana artifisialy maherin'ny 2.5 tapitrisa taona lasa izay.
Ho fanampin'izay, manana fahatsiarovana miverina hatramin'ny ela izy ireo ary tahaka izany, Ahtun Re dia nanisy marika ny Pleiadeans ho "Tranon-tranon'ny Universe."
Injeniera tena tsara koa izy ireo ary miara-miasa amin'ny karazany ET hafa amin'ny fampivoarana ny sambon-danitra.
Ny mahaliana dia nisy ekipa roa mpiasan'ny seranam-piaramanidina sovietika Salyut 7 nahatsikaritra anjely anjely goavambe teo ivelan'ny toerana misy azy ireo tamin'ny 1984. Ahtun Re dia nanambara fa Pleiadiana izy ireo ao amin'ny vatan'izy ireo astral na fanahy, araka ny voalaza tao amin'ny lahatsoratro voalohany momba ny UFO. Raha te hahalala bebe kokoa dia mankanesa any:
Pleiadians mitsidika an'i Salyut 7 ao amin'ny Vatan'izy ireo
Amin'ity fampidirana ity dia avelao aho hizara izay ET izay nirotsaka an-tsehatra tamin'ny UFO nopihan'ny mpanamory fiaramanidina amerikana:
2004 Tic Tac Spaceship nifanehatra tamin'ny komandy amerikana David Fravor an'ny USS Nimitz dia nalain'ny Pilates nataon'i Baikals
Ahtun Re dia nitantara fa ilay sambo boribory 40 metatra nofaritan'i Commander David Fravor tamin'ny 2004 ho toy ny asa-tanana Tic Tac, fony izy nihetsika tamin'ny morontsirak'i Mexico, dia nonenan'i Baikals.
Ho fanampin'ny sambo Tic Tac, ireo mpiasan'ny radara dia nahita UFO kely kely kokoa nanaraka ny sambo Tic Tac. Ahtun Re dia nitantara fa ireo sambo ireo dia notarihin'i Pleiadeans nanatevin-daharana ny asa-tanana Baikal Tic Tac.
Grey sy ny asa tanana Gimbal Space 2014 nalaina tamin'ny horonan-tsarin'i USS Theodore Roosevelt Fighter Pilots
Ny mpanamory fiaramanidina mpiady avy amin'ny mpitatitra fiaramanidina USS Theodore Roosevelt miala ny morontsiraka atsimoatsinanan'i Etazonia nandritra ny taona 2014-2015 dia naka sary ny UFO antsoina hoe sambon-danitra "Gimbal", izay nihodina rehefa nanidina tamin'ny hafainganam-pandeha.
Gimbal dia manondro fitaovana apetaka amin'ny kibon'ny fiaramanidina afaka mihodina hitazomana ny radara na ny làlan-dahatsary an'ireo zavatra mandeha amin'ny rivotra rehefa mihodina ny fiaramanidina.
Ho fanampin'izay, UFO kely kely dimy no voamarika nanatrika ny asa-tanana Gimbal.
Ahtun Re dia nanambara fa ny sambon-danitra Gimbal dia nitazon'ny karazana ET fantatra amin'ny anarana hoe "Grays." Hiresaka momba ny Grays amin'ny lahatsoratra manaraka izahay. Ahtun Re dia nilaza fa ity asa tanana Gimbal ity dia maneho endrika efa tonta sy efa tonta.
Ireo UFO dimy kely kely tratra tamin'ny alàlan'ny horonan-tsary nanatontosa ilay asa-tanana Gimbal dia nalain'ny Pleiadeans.
Raha fintinina, ny sambon-danitra Tic Tac izay hitan'ny Komandà Fravor tamin'ny 2004 dia notantanan'ny Baikals. Ny asa tanana Gimbal nojerena tamin'ny 2014 dia nitazoman'ny karazana Grey ET. Ireo UFO kely kokoa mitondra ny asa-tanana Gimble dia notarihin'i Pleiadeans.
Navy “Mandehana haingana” UFO nalain'ny USS Theodore Roosevelt Pilots tamin'ny 2015 dia Drôna Pleiadianina
Ny asa-tànana UFO fahatelo nalaina tamina horonantsary mpiady amerikana amerikana efa voamarina dia nantsoina hoe "GoFast", satria ity fiara kely ity dia hita nanakaiky ny ranomasina nanamorona ny morontsiraka atsinanan'i Etazonia.
Ahtun Re dia nitantara fa drone Pleiadean ity, manombana ny maripanan'ny ranomasina. Raha fintinina, araka ny voalaza ao amin'ny lahatsoratro voalohany momba ny ET, dia tsy eto izy ireo handresy antsika. Izy ireo dia mpahay siansa mandinika ny planetantsika noho ny fahasamihafana biolojika tsy manam-paharoa ary manantena izy ireo fa afaka manampy antsika handositra ny famongorana betsaka, izay mety ho vokatry ny fiakaran'ny hafanana.
2004 Porofo ara-tafika italiana an'ny UFO Baikal
Anisan'ny seho amin'ny fahitalavitra, Tsy fantatra: Ao anatin'ny fanadihadiana ataon'ny UFO any Amerika, S1, Ep 6-Ny fanambarana, nisy sombin-javatra nitranga tany Sisila tamin'ny 2004. Amin'ity fizarana ity, ny manamboninahitra amerikana teo aloha, Luis Elizondo, dia nandray anjara tamin'ny fihaonana tamin'ireo tompon'andraikitra miaramila italiana momba ny tranga UFO.
Ny lietnà-tafika italianina, kolonely Clarbruno Vedruccio, dia nizara fihaonan'ny UFO izay nitranga tany avaratr'i Sisila.
Notantarain'i Vedruccio fa tamin'ny 2004, dia nisy tranga niseho izay nirehitra tampoka ny trano tany amin'ny faritra avaratry Sisily ary tsy maintsy natao ny famoahana ireo mponina.
Notaterin'ny mponina teny an-toerana fa ny taratra angovo avy any amin'ny Ranomasina Mediterane dia nahatonga ny doro tranony.
UFO miendrika saosy iray dia mamoaka taratra angovo manimba ny helikoptera miaramila italiana
Ho valin'izay, nandefa angidimby ny Tafika Italiana mba hanombanana ny zava-misy. Ny ekipan'ny angidimby dia nitatitra fa nahita sambo mpamorona saucer ao aorian'izy ireo, izay namoaka taratra angovo izay nanimba ny rafitry ny angidimby. Na dia tsy nahatonga ny copter nianjera aza ny fahasimbana dia nalaina sary ny fahasimban'ny rafitra rotor.
Ahtun Re nilaza tamiko fa ny asa tanana UFO voarohirohy tamin'ity tranga ity dia i Baikals no nitantana azy. Tsy niniana natao ny taratra herinaratra nahatonga ny haintrano tao an-tanàna. Fa kosa, ny Baikals dia nanana olana ara-teknika tamin'ny rafitra fampiroboroboana ny asa-tanany, izay niafara tamin'ny taratra angovo nahatonga ny hain-trano tao amin'ny tanànan'i Sisilianina.
Etsy ankilany, rehefa nandefa helikoptera ny tafika italiana hanadihady ny afo ary nisy sambo miendrika saucer nitifitra taratra angovo nanimba ny fitaovam-piaramanidina helikoptera, nilaza i Ahtun Re fa fihetsika iniana kendren'ny Baikals io, tsy hamotehana ny angidimby. fa hamela porofon'ny fisian'i Baikal.
Andao isika ho mpandray vahiny amin'ny mpitsidika ny ET
Amin'ny ankapobeny, ny ET amin'ny habakabaka izay mandroso lavitra noho ny antsika dia tsy te-handratra antsika. Ny iray amin'ireo olana lehibe manjo azy ireo dia ny fahaveloman'ny planeta Tany, noho ny fiakaran'ny hafanana manerantany izay mety hiteraka hetsika fandroahana faobe. Ho fanampin'izany, manahy izy ireo ny amin'izay mety ho fihetsiky ny zanak'olombelona amin'ny fisian'izy ireo.
Noho io ahiahy io dia toa milalao lalao "saka sy totozy" amin'ny zanak'olombelona ny ET. Mamela ny tenany ho hita amin'ny sary sy horonan-tsary tsy tambo isaina nalain'ny mpiasan'ny tafika izy ireo, ary koa ny olom-pirenena tsotra nirongo telefaona finday. Toa mampahafantatra anay izy ireo fa eto izy ireo, nefa tsy mametraka fandrahonana amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra.
Fotoana mampientam-po io rehefa hanaiky ny zava-misy isika olombelona fa manana mpifanila vodirindrina any an-danitra isika izay mandroso kokoa noho ny teknolojia sy ara-panahy ary ara-tsaina kokoa noho isika, izay eo amin'ny planetantsika ankehitriny.
Raha mila lisitr'ireo lahatsoratra ET sy UFO dia mankanesa any: ET sy ny UFO azy ireo
Raha te hahalala vaovao hatrany momba ny lahatsoratra vaovao, azafady Araho izahay amin'ny alàlan'ny pejinay Facebook: Fikarohana momba ny firaisana